प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यअवस्था गम्भीर, एपेन्डिसाइटिस फुटेर फैलिएको थियो संक्रमण – Health Post Nepal
२०७६ मंसिर १० गते १६:२८
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यअवस्था गम्भीर रहेको बुझिएको छ । मंगलबार बिहान अकस्मात् स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि महाराजगन्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यपरीक्षणका क्रममा एपेन्डिसाइटिस फुटेको पाइएको थियो । एपेन्डिसाइटिस फुटेर पेट र शरीरका अन्य भागमा समेत संक्रमण फैलिसकेकाले तत्कालै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने निष्कर्ष विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको टोलीले निकालेका थिए ।
बिहान ९ : ३० बजे अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यपरीक्षणलगत्तै ४५ मिनेट लगाएर शल्यक्रिया गरिएको थियो । शल्यक्रियापछि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य स्थिर रहेको र सघन उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्थासहित निगरानीमा राखेर उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा. उत्तमकृष्ण श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विज्ञ चिकित्सकहरू सम्मिलित टोलीले परीक्षण गर्दा एपेन्डिसाइटिससहित पेटको संक्रमण (पेरिटोनिटिस) देखिएपछि तत्काल ल्यापेरोटोमी एन्ड एपेन्डिक्टोमीलगायतका विधिबाट उपचार गरीकन हाल सघन उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्थासहित निरन्तर निगरानीमा राखिएको छ ।’
विशेषज्ञ चिकित्सकका अनुसार ल्यापेरोटोमीको अर्थ प्रधानमन्त्री ओलीको पेट चिरेर त्यहाँ फैलिएको संक्रमण हटाउने तथा एपेन्डिसाइटिस फुट्दा अन्द्राहरूमा फैलिएको पिपलगायत दूषित पदार्थ सफा गर्न अपनाइएको उपचार विधि हो । त्यसैगरी, एपेन्डिक्टोमीको अर्थ प्रधानमन्त्री ओलीको फुटेको एपेन्डिसाइटिस काटेर फालिएको हो ।
स्वास्थ्यअवस्था गम्भीर, तर स्थिर
विशेषज्ञ चिकित्सकका अनुसार एपेन्डिसाइटिस फुटेर शरीरमा संक्रमण फैलिनु भनेको निकै गम्भीर अवस्था हो । एक स्वस्थ मानिसमा पनि यो अवस्था निकै जटिल मानिने गर्छ । यो अवस्थामा बिरामीको शरीरभरि नै संक्रमण फैलिएर मल्टिअर्गान फेल (शरीरका विभिन्न अंगहरू एकैपटक फेल हुने अवस्था) हुने खतरा रहन्छ । यस्तो अवस्था आउँदा बिरामीको ज्यानै जान सक्ने खतरा हुने विशेषज्ञ चिकित्सकको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओली १२ वर्षदेखि मिर्गौला प्रत्यारोपणका बिरामी भएकाले उनमा यसको खतरा सामान्य मानिसभन्दा बढी नै हुने विशेषज्ञ चिकित्सकहरू बताउँछन् । ट्रान्सप्लान्ट गरेका बिरामीले प्रतिरक्षात्मक क्षमता घटाउने औषधि खाइरहेको हुने भएकाले संक्रमणको खतारा सामान्य मानिसमा भन्दा निकै बढी हुन्छ ।
‘सामान्य मानिसमा पनि एपेन्डिसाइटिस फुटेर शरीरमा संक्रमण फैलिएको अवस्थालाई निकै गम्भीर मानिन्छ,’ एक विशेषज्ञ चिकित्सकले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओली प्रत्यारोपणका बिरामी हुनुहुन्छ । उहाँले लामो समयदेखि प्रतिरक्षात्मक क्षमता कम गर्ने इम्युनोकम्प्रोमाइज औषधिको सेवन गरिरहनुभएको छ । यसले पनि उहाँमा संक्रमणको जोखिम बढी हुन्छ ।’ यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले मिर्गौलाको हेमोडायलाइसिस गराइरहेका कारण भने संक्रमणको जोखिममा खासै फरक नपर्ने ती चिकित्सकले बताए ।
एपेन्डिसाइटिस फुटुन्जेल कसरी थाहा भएन ?
प्रधानमन्त्री ओली निरन्तर चिकित्सकको निगरानीमा थिए । पछिल्लो समय मिर्गौलाले काम गर्न छाडेपछि नियमित डायलाइसिस गराइरहेका प्रधानमन्त्री ओली नियमित विशेषज्ञ चिकित्सकको घेरामा छन् । त्यसै पनि एपेन्डिसाइटिस ज्यादा दुखाइ हुने रोग हो । दुखाइपछि समयमा अस्पताल पुगेको खण्डमा यसलाई ठूलो समस्या मानिँदैन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीमा एपेन्डिसाइटिस फुटेर संक्रमण फैलिँदासम्म पनि कसरी थाहा भएन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिरक्षात्मक क्षमता घटाउने इम्युनोकम्प्रोमाइज ड्रग लिइरहेकाले उनमा एपेन्डिसाइटिसको दुखाइ कम महसुस भएको विशेषज्ञ चिकित्सकको अनुमान छ । रोगअनुरूप हुनुपर्ने दुखाइ महसुस नहुँदा समयमा परीक्षण हुन नसकेका कारण इपेन्डिसाइटिस फुटिसकेपछि मात्र लक्षण देखिँदा स्वास्थ्यपरीक्षणमा ढिलाइ भएको उनीहरूको भनाइ छ । इम्युनोकम्प्रोमाइज बिरामीमा सामान्य संक्रमणको पनि ज्यादा खतारा हुने हुन्छ भने गम्भीर संक्रमण फैलिसकेपछि मात्र थाहा हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्न पुगेको हो ।